Dowlada Turkiga oo ka hadashay saameynta khilaafka Khaliijka ku yeeshay Somalia… – Hagaag.com
Dowlada Turkiga oo ka hadashay saameynta khilaafka Khaliijka ku yeeshay Somalia…
Posted on 12 Maajo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Dowlada Turkiga ayaa markii ugu horeysay si cad uga hadashay saameynta Dowlada Soomaaliya ku yeelatay Khilaafka ka dhex aloosan qaar kamid ah Wadamada Khaliijka Carabta .
Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa sheegay in Soomaaliya saameyn xun ku yeelatay Khilaafka Wadamada Khaliijka, waxa uuna tilmaamay in Soomaaliya lagu hayo cadaadis ka dhashay Khilaafka.
Waxa uu sheegay Wasiirka Arimaha Dibadda Turkiga in dowlada Soomaaliya lagu cadaadinayo in ay dhinac la safato kana laabato go’aankii ay horey u qaadatay ee dhex dhexaadnimada.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa ku baaqay in la xurmeeyo lana tixgaliyo midnimada Soomaaliya, waxa uuna wax laga xumaado ku tilmaamay in dalalka qaar looga faa’iideysto daruufaha iyo xaaladaha adag ee ku sugan yihiin.
Dowlada Soomaaliya ayaa cadaadis xoogan kala kulmeysa dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraatka kuwaa oo ku cadaadinaya Soomaaliya in ay ka laabato go’aanka dhex dhexaadnimada xiriirkana una jarto dowlada Qatar.